Bụ n'ebe ọ bụla yiri software ma ọ bụ ọzọ ka DVD ụlọ nyocha?
> Resource> DVD> ọ bụla-atụ aro DVD ụlọ nyocha Alternative?
Ị nụrụ banyere DVD ụlọ nyocha site na ụfọdụ nke ndị enyi gị na chọrọ iji ya na gị na Mac? M kwere na na dị nnọọ chọpụtara na ọ bụ agaghị ekwe omume n'ihi na oge ịbụ n'ihi na software naanị nleghari maka echichi na a Windows arụ ọrụ usoro. Nwere ị gbalịrị si ndị ọzọ yiri onye na-DVD ụlọ nyocha? Bụrụ na ọ bụghị, ikekwe ị pụrụ agbalị lelee ndepụta nke Top 5-atụ aro Video converters. Ọ ga-azọpụta gị hassle na oge nọrọ na-eme nnyocha na ihe ọzọ. Ndị ọzọ karịa AVS Video Ntụgharị, ndị fọdụrụ n'elu 5 video converters dakọtara maka ma Windows na Mac ịwa PC. My kasị mma nkwanye ga-Wondershare Video Converter Ultimate for Mac.
Ọ bụghị naanị mfe iji n'ihi na a mbido, ma ọ na-enye dịgasị iche iche nke na-akwado ọsọ ọsọ na mmepụta formats. Yiri DVD ụlọ nyocha, ị ga-enwe ike họrọ gị menu ma ọ bụ atụrụ nke gị DVD ma hazie ya na gị na mmasị. Otú ọ dị, interface nke software bụ nke ukwuu mfe ịnyagharịa na ị nwere ike idezi gị videos tupu eke ma ọ bụ na-ere ọkụ na gị onwe gị DVD. Download ikpe mbipute ugbu a na-agbalị ya maka onwe gị.
1 bulite gị videos
Mgbe echichi, abụọ-pịa ẹkedori Wondershare Video Ntụgharị maka Mac. Biko pịa na apa ọkụ 's taabụ si n'elu nke interface iji hụ na ị na-nri-arụ ọrụ n'ógbè ahụ. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịmalite ịdọrọ-na-dobe gị video faịlụ na na software. Ị nwere ike họrọ ebe ị ga-amasị ịzọpụta gị converted faịlụ site na-agbanwe mmepụta obodo ndekọ na ala nke interface. Nanị pịa na Dezie bọtịnụ ma gaba nzọụkwụ ọzọ maka inwekwu ezi-na-n'iji ya gee ntị gị videos.
2 Dezie gị videos
Ị nwere ike ewepụtụ achọghị Mpaghara ma ọ bụ akụkụ gị videos mkpachị ma ọ bụ ubi ya na mgbe ịgbanwe olu, nchapụta, iche ma ọ bụ saturation nke faịlụ. Alternatively, tinye mmetụta ma ọ bụ tinye a watermark na itinye gị ebudatara sobtaitel. Ozugbo niile nke edezi mere, isi na Nzọụkwụ 3 ike ma ọ bụ ọkụ na gị onwe gị DVD.
3 Mepụta ma ọ bụ ọkụ na gị onwe gị DVD
Ị nwere ike mgbe nile ka a oyiri nke gị ugbu DVD (na bụghị DRM-echebe) site na-ahọpụta Copy. N'otu oge ahụ, ị nwere ike ike ma ọ bụ ọkụ na gị onwe gị DVD site na apa ọkụ nhọrọ. Mgbe ahụ, ị na-aga na ịhọrọ ma ị ga-amasị ọkụ gị videos gị SuperDrive, a DVD nchekwa, dị ka a .dvd media faịlụ ma ọ bụ ihe ISO oyiyi.
Gịnị mere The DVD Drive-adịghị arụ ọrụ?
Ọ bụla-atụ aro ClipWrap Alternative?
Top 10 Best Yoga DVD maka Beginners
Olee otú Ọkụ Blu-ray Disc (BD-R / RE) na ImgBurn maka Free
Olee otú Ọkụ Hulu Movies ka DVD